Maxaa keenay in dabaqa saddexaad iska soo tuurto haweeyneeydii soomaaliyeed ee Noorweey? | Somaliska
Maxaa keenay in dabaqa saddexaad iska soo tuurto haweeyneeydii soomaaliyeed ee Noorweey?
Maalintii shalay aheyd ayaa waxaa xaafadda Grönland ee dalka Noorwaay dabaqa sadexaad iska soo tuurtay haweeneey soomaali ah oo xaaladeeda caafimaad aad u liidato luguna dabiibayo cisbitaalka Oslo.
Haddaba si aan u oggaano asbaabaha keenay in haweeneydani falkaasi sameeyso ayaan waxaanu helnay macluumaad kooban. Haweeneydan ayaa lugu magacaaba Seynab Cilmi Guuleed, waxaa sanadkii 2105-tii bishii sibteember booliska dalkaasi ku fureen xabbado, ka dib markii haweeneydani ay mindi ku hubeeysneyd. Talaabadda ay boolisku xabadaha ku fureen ayaa waxaa ay xilligaasi dhalisay dood qaabka ay booliska xabadda ugu fureen iyo mindida ay sida tahay nooca ay aheyd.
Dhinaca kale Seynab oo ah, hooyo leh saddex carruur ayaa la tilmaamaya in xannuun xagga maskaxda ah ay qabto, waloow ay ay beenisay hadana shalay ee ay dabaqa dheer iskaga soo tuurtay wuxuu sida cad ceeda oo kale u iftiimanaya in xaalad caafimaad darro xagga maskaxda ah ay qabto. Isla sanadkaasi ayaa Seynab waxaa ay xirneyd muddo kooban.
Shabadda Somaliska.com ayaa macluumaad intaas ka badan isku dayday ineey hesho mana jiraan waxrbixin intaas dhaafsiisan oo ay suuragal noo noqotay inaan helno. Haddiise Alla idmo wixii intaa ka badan ee soo kordha dib ayaan idiin kala soo socod siin doonaa.
Wasiir Hadliye: “Laanta socdaalka ee Soomaaliya xog beey u leedahay soomaalida Noorweey laga soo celinayo”
Tuugada kaararka bangiyada oo soo korortay
February 21, 2017 at 13:31
Hhhhhhhh 2105: laba kun boqol iyo shan yaab
February 21, 2017 at 16:17
Ma fahmin sanadka ? Norway miyuu ka jiraa sanadkan hhhh
February 22, 2017 at 10:47
Maya habuubunin muhimada uun fahan inta aad ku mashquuli laheyd qoraalka sanadka qaldamay sanad wuxu ula jeedaa 2015
February 22, 2017 at 18:38
Muhiimada ka raaca reer aragti gaaban Baad tihiine marxalada laga hadlayo iyo miraha murtida Bal tixraac ku sameeya faaruq yahaw
February 25, 2017 at 15:22
Hhhh ar somaliya xumaha jecla baristisa sanad qaldamay miya muhiima masa arinkan hoyada ku dhacday in lagamurgoda bey aheed
February 25, 2017 at 15:24
Waxan leyahay hoyadan alaha cafiyo maskax iyo jirba
warkaan norsomnews.com ayaa ka soo copy gareesen:(